Manufactuer ya DW-HF-35kw Induction Kuchengetedza Zvishandiso, kushandiswa kwemhepo, chigadzirwa
musha / high frequency induction heating / DW-HF-35kw Induction Kuchenesa Equipment
Category: high frequency induction heating Tags: DW-HF-35kw, high frequency induction device, high frequency induction heating device, high frequency induction heat machine, high frequency induction system, induction heater, Induction Heating equipment, induction heating equipment manufacturer
Iyo yakakwirira induction heat machine makagadziri uye mutengesi wekugadzirisa kushandiswa kwenzira, kushandiswa kwemabhizimisi emhizha, kushandiswa kwekugadziriswa, PWHT, kutengesa kushandiswa kwekugadziriswa kwepisheni, kupera kukodzera, kuomeswa kwekugadziriswa kwepamusoro, nezvimwewo.
1. 100% basa sycle, kuenderera kushanda kunotenderwa pakukwirisa kwesimba.
2. Kurema kurema, 50-70KG chete.
3. Nguva dzose simba remazuva ano kana rakasimba rinogona kusarudzwa zvinoenderana kuti riwane kupisa kwepamusoro.
4.Kuratidzira kwesimba rekudziya uye kupisa kwazvino uye kuwandisa kuwanda.
5. Auto-muripo wedunhu we frequency modulation uye frequency, mashandiro edhijitari yakakwira chaiyo simba kutanga kunovandudza zvakanyanya iyo Heating uye Brazing kugadzikana.
Input simba chido 3X380V 50-60HZ
Kuchenesa mvura max 0.3Mpa≥6L / MIN
Cubage Ikombiyuta yakagadzirisa 550X240X485mm
Kureba kwetambo> 2m